नेपाल लाइफको स्किल डेभलपमेन्ट एन्ड मोटिभेसन कार्यक्रम सम्पन्न - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: २७ माघ २०७६, सोमबार
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ‘स्किल डेभलपमेन्ट एन्ड मोटिभेसन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आईतबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा सीईओ झाले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ब्रान्ड एम्बेस्डर भनेकै देशका कुना कुनामा पुगेर जीवन बीमाका बारेमा सचेतना फैलाउने सम्पूर्ण अभिकर्ता भएको बताए । त्यसैले कम्पनीले सक्रिय अभिकर्ताहरु अझ बढाएर चालू आवमा दोब्बर गर्ने लक्ष्य राखेको सीईओ झाको भनाई थियो ।
बीमाबाटै देशको समृद्धि, नागरिकको भविष्यमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरणर अभिकर्ताको पनि भविष्य निर्माण गर्न सकिने उनको कथन थियो ।
सो अवसरमा सीईओ झाले बीमा गराउनुभन्दा पहिले बीमा गर्ने व्यक्तिको आर्थिक स्थिति बुझेर, जीवन बीमाको आवश्यकता महसुस गराएर मात्र बीमा गराउन सुझाव दिए । स्तो लोकप्रियता भन्दा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह तथा दीर्घकालिन लाभमा नेपाल लाइफले ध्यान दिने दाबी गरे ।
झाले भने, ‘बीमा विश्वासमा हुन्छ, अभिकर्ताको बोलीमा हुन्छ, त्यसैले सबै अभिकर्ताले बीमा के हो र किन आवश्यक छ भन्ने चेतना आम नागरिकमा जगाउनुपर्छ । साथै बीमितको विश्वासमा आँच आउने काम गर्नु हुँदैन । त्यसपछि मात्र आम नागरिकमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुन्छ, हरेक व्यक्ति बीमामा आवद्ध हुन चाहन्छन् र आफैं अभिकर्ताको खोजी गर्दै आउँनेछन् ।’
कम्पनीका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईंले स्वागत मन्तव्य राख्दै कम्पनीलाई यो अवस्थासम्म ल्याई पु-याउने श्रेय सम्पूर्ण अभिकर्ताहरुको रहेको बताउँदै सम्पूर्ण अभिकर्ताहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये करिब एक तिहाई बजार हिस्सा ओगटेको यस कम्पनीको चुक्तापूँजी जीवन बीमा क्षेत्रकै सर्वाधिक रू. ५ अर्ब ५० करोड रहेको छ भने लगानी रू. ८२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, कम्पनीको जीवन बीमा कोष ७२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र शेयरधनी कोष ८ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी रहेको छ । कम्पनीले यस आर्थिक वर्षको मध्य सम्ममा जम्मा रू. १४ अर्ब ७ करोड बीमा शुल्क संकलन गरेको छ ।
१ लाख ४७ हजार ४२ प्रशिक्षित अभिकर्ता रहेको यस कम्पनीले आफ्ना सेवाग्राहीहरू तथा ग्राहकहरूका लागि हालसम्म देशभर फैलिएका २ सय शाखा तथा उप शाखा कार्यालयहरु मार्फत जीवन बीमासम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । हालसम्म स्वदेश र विदेश गरी २७ लाख २ हजार ३ सय व्यक्ति यस कम्पनीमा बीमित भइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको यस्तो आग्रह
साउन २८ । काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानको मस्यौदामा चित्त नबुझेका विषयमा वार्ता, एकता र […]
हावाबाट सर्ने भाइरसबाट बच्न कस्तो माक्स लगाउने, कुन माक्सलाई बढी सुरक्षित ?
काठमाडौं । धेरैजसो भाइरस हावाबाट नै मानिसमा सर्ने गरेको पाईन्छ । राम्रो गुणस्तरको मास्क लगाउने र समय–समयमा […]
प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न
काठमाडाैं । प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशन सकिएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको २६ औं बैठकमा […]
प्रियंका एशियाकै सेक्सी लेडी
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा पुनस् एकपटक एसियाकै सेक्सी नारीमा दरिएकी छिन् । पछिल्लो चार वर्षमा […]
मन्त्रिपरिषद् बैठक : भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख, ५५ बर्षमै बृद्द भत्ता
काठमाण्डौ । सरकारले भूकम्पपीडित र गत वर्षको बाढीपहिरोपीडितलाई घर निर्माणका लागि थप एक लाख अनुदान दिने […]
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित भएको छ। बिहीबारदेखि हुन लागेको एसईई परीक्षा अर्को निर्णय […]